? မင်းသားကြီးအာနိုးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ – စွယ်စုံသုတ
? မင်းသားကြီးအာနိုးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ
#အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ပုံကတော့ ဟော်တယ်တခုရှေ့ သူ့ရုပ်ထုအောက်မှာ အိပ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး ArnoldSchwarzenegger ရဲ့ ပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူဒီပုံကို ရိုက်ပြီး တင်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မိတ်ဆွေရဲ့ ဘဝမှာ ဘာမှ မမြဲခြင်းဆိုတာကို ပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် တင်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
သူ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် တုန်းက ပုံပါ ဟော်တယ်က တာဝန်ရှိသူတွေက သူရဲ့ ကြေးသွန်းရုပ်ကို ဟော်တယ်ရှေ့မှာ ထားခွင့် တောင်းခဲ့ပြီး သူတို့ဟော်တယ်ကို မင်းသားကြီး အာနိုး လာရင် တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ အမြဲလာနိုင်ကြောင်းနဲ့ လာတိုင်းလည်း
အခန်းတစ်ခန်း အဆင်သင့် ပြင်ပေးကာ လိုလေသေးမရှိ ပြုစုမယ်လို့ ပြောကြား ကတိပေးခဲ့ တာပါ။
ဒါပေမဲ့လည်း ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက် တစ်ရက်မှာ မင်းသားကြီး အာနိုး ဟိုတယ်ကို သွားတဲ့အချိန်မှာ ဟိုတယ် တာဝန်ရှိတွေက အခန်းလွတ် မရှိတော့ကြောင်း၊ ဟိုတယ် ဝန်ထမ်းတွေက အသစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရင်က ကတိ ကဝတ် တွေကို မသိတော့ကြောင်းသာ ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် မင်းသာကြီး အာနိုးက အိပ်ဖျာတစ်ချပ်ကို ယူပြီး သူရဲ့ကြေးရုပ်တုရှေ့မှာ သွားရောက် အိပ်စက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ Arnold က “ကျွန်တော် အရေးပါတဲ့ ရာထူးတစ်ခုကို ထမ်းဆောင်နေတုန်းက သူတို့တွေ အမြဲတမ်း ချီးမွှမ်းပြီး ပြုစုခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်လည်း တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတော့
ကျွန်တော့်ကိုမေ့ခဲ့ကြပြီး ကျွန်တော့်ကို ပေးထားခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ ကတိတွေကိုလည်း ပျက်ကွက်ခဲ့ကြတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ ရာထူးတွေ စည်းစိမ်တွေ ပကာသနတွေကို ဘယ်တော့မှ မယုံကြည် အားကိုးမလိုက်ကြပါနဲ့။နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒါတွေက ဘာမှ မဟုတ်တော့ပါဘူး။အားလုံးကို ပြောချင်တာက ခင်ဗျားက အရေးကြီးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အားလုံးက ခင်ဗျားရဲ့ ခင်မင်သူတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ခင်ဗျားသာ သူတို့ရဲ့ အကျိုးအမြတ်အတွက်ဘာမှ မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားဟာ ဘာမှ မဟုတ်တော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ ခင်ဗျားဟာ ကိုယ်ထင်ထားသလို ဟုတ်မနေဘူးဆိုတာ နားလည်ထားရမှာပါ” လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
? ZawMoe ? (ပန်းပျိုးသူ)
တစ်နေ့ ခေါက်ဆွဲ နှစ်ဗူးနဲ့ ဆာလောင်သံတွေကြားက...
မနက်ခင်း မှာ သွေးသစ္စာသီချင်း နဲ့အိပ်ယာထ ည...
“ရာဇဝင်ထဲက မင်းဆိုး မင်းညစ်ရဲ့ နိဂုံး”
“မအောင်မြင်သော အာဏာသိမ်းပွဲ နှင့် ချွတ်ခြုံကျ...